Lokanga sy valiha: Potika amin’ny politika… adilahy | NewsMada
Lokanga sy valiha: Potika amin’ny politika… adilahy
Par Les Nouvelles sur 10/10/2020
Ny lokanga tsy atao, hono, lehibe ny voatavo. Fahalainana sy fialan’ny malain-kisahirana izay. Mba inona kosa ny an’ ireo hoe tsy mety handray anjara amin’ny fifidianana loholona ? Le­hi­be ny raharaha ka sa­rotra atrehina noho ny hakelezan’ny tena, tsy fahatokisan-tena, fiheveran-tena diso. Tsy inona fa tahotra ialokalofana amin’ny hoe fa­narahan-dalàna ? Politi­ka tsotra izao : omena sy mahazo vahana ary manjaka ho azy, ampitarazohana ny raharaha amin’ny hoe fanarahan-dalàna.
Inona ny marina ? Ny tsy azo ilana, ny to­kony hatao, ny mety, ny ma­hasoa… Samy manana ny filazany; eny, na ny samy mpahay lalàna aza. Eo koa tsinona ny hoe didy fakan-tahaka amin’ny toe-javatra efa nitranga teo aloha, irosoana sy anapahan-kevitra. Tsy miandry ny tsy afaka. Izay ny lalàn’ ny herin’ny politika, ma­noloana ny herin’ny lalàna… ady fiady. Tsy main­tsy ampandehanina ny raharaham-pirenena, na mandeha amin’ny lalan- tsarotra hoe tsy ma­ha­zatra na tsy mety amin’ ny rehetra aza.
Izay ilay hoe: politika io. Arakaraka ny fifandanjan-kery sy ny tombontsoa tadiavina na arovana amin’izany. Manana hery toy inona ireo tsy mety handray anjara amin’ny fifidianana loholona no hoe hikatso eo ny raharaham-pirenena? Na handringa ny andrimpanjakana, tsy hisy ny fahamarinan-toerana politika… Lehibe ny voatavo, tsy anaovana lokanga? Any dia efa tsy mitovy ny fi­jery… mila alefa lavitra. Vao mainka izay hoe tadin-dokanga… Samy manana izay zava-dehibe sy mahamaika azy avy.
Soa ihany, mbola eo ny volontsanga mijoro azo anaovam-baliha. Amin’ izany koa no akana sy anaovana toham-baliha. Tsy hitsaha-pilana toy ny mpitendry valiha maty vady tsinona, sanatria, izay te handroso sy vonona hampandroso ny raharaham-pirenena… tsy mi­andry ny marefo, na tsy afaka, na tsy te handeha. Eny, mitady fihemorana hikorontanana aza. Mba tsy tonga tamin’ny fanafoanana tanteraka ny An­tenimierandoholona aza. Fanararaotra izao, raha mbola te hiady sy hanao politika ihany.
Raha nofoanana teo, ohatra, ny Antenimieran­doholona, hitsaha-pilana ho azy amin’izany ny tia gidragidra mitady izay hokitranina lava, fa tsy mety hampiray feo amin’ny maro. Tsy hoe misy tampenan-bava na sakanan-dalana amin’ny aleha­ny sy ataony. Saingy aleo mangina raha tsy misy feo tsara lavitra sy mahasoa noho ny fanginana… isaintsainana izay (h)aleha sy (h)atao. Na ny ankehitriny io, na ny mbola ho avy. Politika no atao. Sao potika ho azy amin’ny politika… adilahy efa ho lava?
Miady ao anaty rafitra
Tsy manana fahasahiana na tsy mahazaka ny fidirana ao anatin’ny rafitra ara-dalàna intsony amin’ny fanaovana politika ? Tsy inona fa ny fananana olom-boafidy ara-dalàna, raha ny ara-dalàna no iadiana. Hanamaro isa ireo tsy mety hanao fifidianana? Eny, na hirotsaka na handrotsaka lehiben’ny fokontany aza, an­gamba. Nefa be gedrigedry sy be gidragidra amin’izay mitranga sy atao rehetra. Ny fifidianana ihany no tena andanjana ny tanjaky ny antoko politika fa tsy asa vava na adilahy.
Koa inona ny lanja sy tanjak’izay tsy mety handray anjara amin’ny fifidianana? Eny, na heverina ho matanjaka sy efa nanjaka toy inona aza. Tsy hisy handeha rehefa tsy eo? Mazava izao fa tsy ny tanjany no nahazoany fanjakana, fa ny fahazoany fanjakana no mampatanjaka azy raha heverina na lazaina ho matanjaka. Mby aiza amin’izao fiatrehana fifidianana loholona ady vaventy izao ? Mana­na mpifidy vaventy firy avy izay handrotsaka olon- kofidina? Mba samy kibo mitsara tena amin’izany.
Hanao ahoana izany raha mbola hifidy mpifidy vaventy hafa hanampy izay lazaina ho tsy feno amin’izao fotoana izao? Ny teo aza tsy nahazoana firy, nefa teny ifotony ta­min’ny fifidianana ben’ny Tanàna sy mpanolotsain’ ny Tanàna. Vao mainka hiatrehana izay eny anivon’ny faritra sy faritany… Tahotra fifidianana tokoa izao? Potehina amin’ny politika… adilahy efa ho lava amin’ny vava ? Politika tokoa no atao. Ho hitan’ny havana eo, raha mbola manan-kavana na mahazo namana amin’ izany.
Miady ao anaty rafitra fa tsy ny rafitra na ny olona amin’izany no iadi­ana… mahasasatra ny mi­arina.